Luke Howard na igwe ojii nhazi ọkwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Luke Howard na igwe ojii nhazi ọkwa
Portillo nke German | | Igwe ojii
N’isiokwu bu nke a ụzọ anyị hụrụ ihe dị iche ụdị igwe ojii na anyị nwere ike izute na mbara igwe anyị. Metee nka sɛ meyɛ ankonam. N'ihi nke a, taa anyị na-alaghachi azụ n'oge iji zute onye sayensị nke izizi aha igwe ojii. Ọ bụ ihe Luke Howard. Onye London site na omumu, onye oru ogwu site na aka ya na onye meteorologist site na aka oru, obu nwoke ahu nke igwe ojii na-ele anya kemgbe o bu nwata.
N'ebe a, ị nwere ike ịmụ gbasara akụkọ ndụ niile nke Luke Howard na otu o si bido kpọọ igwe ojii ma mata ha. You chọrọ ịmatakwu banyere akụkọ gbasara ihu igwe na igwe ojii?
1 Luke Howard akụkọ
2 Typesdị ígwé ojii ndị dị na mbara igwe
3 Clouddị ígwé ojii nke Luke Howard kọwara
4 Igwe ojii taa
Luke Howard akụkọ
Mgbe Luke dị obere, ọ na-etinye ọtụtụ awa kwa ụbọchị n'ụlọ akwụkwọ na-elepụ anya na windo igwe ojii. Mmasị ya bụ igwe na ihu igwe. Amuru ya na 1772 na, dika otutu ndi noge ahu, aghotaghi otu igwe oji weputa. Igwe ojii a na-ese n'elu igwe bụ ihe omimi nke ụmụ mmadụ kwesiri idozi ya. Ihe fluffy na-eto ma na-acha ntụ ntụ ruo mgbe mmiri ozuzo. Ọtụtụ mmadụ nwere mmasị na igwe ojii, mana ọ nweghị onye dịka Luke Howard.
Ọ bụkwa na kemgbe ọ bụ nwata ọ masịrị ilegharị anya na mmegharị ha wee kpebie na igwe ojii kwesịrị inwe aha dabere na ọdịdị ha. Ya onwe ya nakweere na ọ naghị etinye uche dị ukwuu na klaasị. Otú ọ dị, ọ dabara nke ọma maka ọdịnihu nke ihu igwe, nwoke a mụtara ọtụtụ asụsụ Latin.
E jiri ya tụnyere sayensị ndị ọzọ, e mepụtara maka ihu igwe ka oge na-aga. Nke a bụ n'ihi na ihe ọmụma na teknụzụ chọrọ iji nyochaa ma soro ihu igwe na ihu igwe dị mgbagwoju anya. Ọ bụ mgbe emesịrị ihu igwe pụtara dịka sayensị na ekele ya anyị nwere ọtụtụ ihe ọmụma gbasara ike nke mbara ụwa.
Ọ dịghị onye nwere ike ijide otu igwe ojii ma nyochaa ya na ulo nyocha ma obu were egwurugwu egwurugwu. Ya mere, ighota igwe ojii choro uzo ozo karia Luke Howard nwere ike inye sayensi a.
Typesdị ígwé ojii ndị dị na mbara igwe
Ọhụụ ya nke igwe ojii mepụtara mgbe ọtụtụ afọ nke na-aga n'ihu na-ele anya na mbara igwe lekwasịrị anya n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụ ezie na igwe ojii nwere ike ịdị n'ụdị dị iche iche n'otu n'otu, na njedebe ha kwekọrọ na ụkpụrụ. Enwere ike ikwu na ha so na ntọala ọgụgụ nke igwe ojii nwere.
Igwe ojii niile nọ ya bụ nke ezinụlọ atọ bụ isi nke Luke Howard mara.
Nke mbụ bụ cirros ígwé ojii. Cirrus bụ Latin maka eriri ma ọ bụ ntutu. Ọ na-ezo aka n'ígwé ojii dị elu nke kristal ice na-akpụ na ikuku. Ọdịdị ya kwekọrọ na aha e nyere ya.
N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ igwe ojii cumulus. Na Latin ọ pụtara kpokọtara ma ọ bụ ikpo ma na-ezo aka na ọdịdị ya.
N'ikpeazụ, e nwere ezinụlọ nke stratus. Ọ pụtara oyi akwa ma ọ bụ mpempe akwụkwọ.
Maka Howard igwe ojii na-agbanwe mgbe niile. Ọ bụghị naanị na ọdịdị kamakwa ha gbadara na ịrị elu, ha jikọtara onwe ha ma gbasaa na mbara igwe. Igwe ojii na-eme ngagharị mgbe niile ma ọ dị obere na ha nwere otu ọdịdị na ịdị elu maka ọtụtụ minit n'otu oge.
Typedị igwe ojii ọ bụla nwere ike iburu n'uche nke a. Ya mere, iji banye n'ime ezinụlọ igwe ojii atọ ahụ, agbakwunyela etiti na ụdị ihe dị iche iche. Emere nke a iji gụnye mgbanwe dị n'etiti otu ezinụlọ na ezinụlọ ọzọ yana iji nwee nkenke karịa na amụma ihu igwe.
Clouddị ígwé ojii nke Luke Howard kọwara
Howard jisiri ike mata ụdị ígwé ojii asaa na cumulonimbus. A makwaara ya dị ka igwe ojii oké ifufe. Site na nka ka okwu a bu "idi na elu nke asaa." A na-akpọ cirrusrat dị ogologo, na-agbadata ma na-agbasa. Ọ pụtara na o nwere njirimara nke igwe ojii ma ọ bụ ntụgharị n'etiti otu na nke ọzọ. Ọzọkwa, nhazi igwe ojii a nwere ike inye anyị ozi gbasara ọnọdụ ihu igwe emeela maka igwe ojii a.
N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụkwa otu igwe ojii cumulus na-agbakọta ma gbasaa ọnụ. Ọ kpọrọ ụdị igwe ojii a stratocumulus. Igwe ojii a dị na ọnọdụ ikuku dị iche iche ma nwee ike inye ozi gbasara mgbanwe ihu igwe naanị site n'ikiri ha.
Ogologo Howard nwere mmetụta mba ụwa ozugbo. Ozugbo akpọrọ igwe ojii aha ma kee aha ya, ịghọta igwe ojii bịara dịwanye mfe ma dokwuo anya. Na mgbakwunye, enwere ike ịghọta ọtụtụ usoro ikuku ndị ọzọ maka ụdị igwe ojii.
Ma obu maka Luke Howard igwe ojii kọwaa ederede zuru oke n'eluigwe nke ahụ na-enyere anyị aka ịghọta usoro nke mgbasa ozi ikuku na-eso. Taa, a ka na-eji ụdị igwe ojii maka amụma ihu igwe.
Kemgbe ahụ nephology malitere. Ọ bụ sayensị na-amụ igwe ojii ma bụrụkwa nnukwu ihe ntụrụndụ maka ndị na-ahụ igwe.
Igwe ojii taa
Ebe ọ bụ na teknụzụ na sayensị agafeela, anyị na-eleba anya na ngwa ekwentị iji mata ihu igwe karịa na mbara igwe. Ugbu a, anyị echefuru na mbara igwe anyị nwere ike inye anyị ọtụtụ ozi gbasara ma anyị ga-ewere nche anwụ ma ọ bụ ugogbe anya maka anwụ.
Otú ọ dị, nne na nna anyị ochie amaghị na ọdịdị igwe ojii ahụ nwere uru ọ ga-aba. Otú ọ dị, ha ji aha aka ha mee ihe dị iche na Latin. O doro anya na ị nụla banyere okwu a «Ajị heaven. Ọ bụrụ na mmiri ezoghị taa, ọ ga-ezo echi ». Okwu a na-ezo aka na mbara igwe nke igwe ojii cirrocumulus rụrụ. Igwe ojii ndị a dị na mbara igwe yiri akwa atụrụ na-egosi na ihu igwe ga-agbanwe n’ihe dịka elekere iri na abụọ. N'ihi nke a, a na-ekwu na ọ bụrụ na mmiri ezosighi n'otu ụbọchị igwe ojii a pụtara, ọ ga-ewe ụbọchị ọzọ ka mmiri zoo.
Anyi aghaghi ichefu na ihe omimi nke ikuku na agbanwe agbanwe oge nile nakwa na amuma ihu igwe si n’igwe ohia adighi ka ntukwasi obi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Luke Howard na igwe ojii nhazi ọkwa